ड्युटीमै आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाएको कारण महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बाध्य पारियो ! सहि या गलत ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला । - Nepal Times Online
काठमाडौं– कम्बोडियामा एक महिला प्रहरीमाथि अचम्म को व्यबहार गरिएको छ । ति महिलाले ड्युटी मा रहँदा आफ्नो बच्चालाई दू ध खुवाइरहेको तस्विर भाइरल भएको थियो ।
उक्त तस्विर भाइरल भएपछि सार्वजनिक रुपमा उनलाई माफी माग्न बा’ध्य पारिएको छ । समाचारमा ज’नाइए अनु’सार ति महिलाले ड्युटिमै रहेक बेला बच्चालाई दुध खुवाएकै कारण मागी मागेकी छन् ।
उनलाई महिलाका बरिष्ठ अधिकारी हरुले सार्वजनिक रुपमा गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्न बा ध्य पारे । यस्तो घटना बाहिर आएपछि घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अधि’का रको बहस सृ’जना गरेको हो ।
यो पनि,,सु’तेका थिए उनि….. तर उ’ठ्दा विश्वभर भा’इरल भैस’केका थिए (१० तस्विर सहित) काठमाडौ । निदाईरहेका श्रीमानलाई महिलाले मोडलका रुपमा प्रस्तुत गरेको त’स्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल भएको छ ।
युवक नि’दाइरहेका देखिन्छन् उनले महिलाको पहिरन लगाएका छन् । त’स्बिरमा उनले पहिरन लगाएको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा उनी माथि महिला का लुगा मिलाएर राखिएको मात्र हो ।
सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर भाइरल भएपछि प्रयोग कर्ताहरुले महिलाको चलाखी भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । क्रि’यटिभ आइडिया देखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता खुसी भएका छन् ।
वास्तवमा यो तस्बिर फिलिपिन्सवाट भाइरल भएको हो । फिलिपिन्समा अनलाईन बुटिक चलाउने महिलाले श्रीमान माथि यस्तो प्रयोग गरेकी हुन् । अ’नलाईन कपडा बेच्नका लागि उनले आफ्ना निदाई रहेका श्रीमानलाई मोडलको रुपमा प्रस्तुत गरिदिइन् ।
यी तस्बिर जोज अनलाईन सप नामको फेसबुक पेजले सेयर गरेको हो । यसमा क्याप्सनमा लेखिएको छ, ‘म्यानेक्विन छैन ? समस्या छैन । कोसिस चाहिन्छ ।’तस्बिर सार्वजनिक गरेको केही बेरमै पोस्टमा हजारौंले कमेन्ट गरिसकेका छन् ।
धेरैजसोले महिलाको क्रिएटिभ आइडियाको तारिफ गरिरहेका छन् । जोज अनलाईन शपकी मालिक जोसेलिन मे ज्याजरेना क्याडेले जब आफ्ना श्रीमान निदाइरहेको देखिन् तब उन ले श्रीमानलाई मोडलको ।
रुपमा प्रस्तुत गर्नेबारे सोचिन् । त्यसैले उनले निदाईरहेका श्रीमानको जिउमा स्कर्ट, टप, जिन्स र महिलाका विभिन्न परिहन राखिदिएर फोटो खिचिन् ।
साभार ः- seroferonewsupdate
Tagged बच्चा, सार्बजनिक
सरकारको स्वीकृतिबिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना ।
नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई […]
काठमाडौं, १० माघ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव काठमाडौं ल्याइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानले शनिबार (आज) १७ नेपालीको शव ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएर त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए । मृतकका परिवारको पीडालाई बुझेर नाफाभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व […]
यस्तो हेन्डसम लाहुरेलाई छोडेर काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ५० राउण्ड गोली सहित १ व्यक्ति पक्राउ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सुरु : तनहुँ